Ebee ka a ga-etinye ala ụlọ PVC kpọmkwem na-News-Topflor China amachi
Ebee ka a pụrụ itinye ala ụlọ PVC kpọmkwem
Echiche:20 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-04-13 Mmalite: Saịtị
Floorlọ PVC bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu n'ala ugbu a. A na-ejikarị ya eme ihe na ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ọfịs, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe egwuregwu, wdg. Taa, m ga-agwa gị okwu banyere ala nke a ga-etinye PVC ala.
General simenti n'ala
Nke mbu, enwere ike itinye ntọala nke simenti na-enweghị nrụnye onwe ya. Enwere ike ịtọ ala PVC, n'agbanyeghị ma ha na-agbanye ma ọ bụ na-agbanye ala, ma ntọala ahụ ga-abụ: enweghị ájá, enweghị oghere, enweghị mgbawa, na ezigbo ala ike, siri ike ma sie ike; ala iru mmiri chọrọ: ihe na-erughị 4.5%; Njehie 2mm n'ime mita 2; enweghị mmanu, agba, agba, gluu, kemịkal mmiri na agba agba na ala. Ọ bụrụ na emezughi ihe ndị a dị n'elu, mgbe ahụ, a ga-emerịrị nhazi onwe gị.
A pụkwara ịtọ ntọala ụlọ ala na ntanye PVC, mana ọ kachasị mma ịhọrọ ala plastik ma ọ bụ SPC mkpọchi ala nke nwere oke nke 2 mm ma ọ bụ karịa, ma ọ bụghị, mgbe emechara ụlọ ahụ, ị ​​ga-ahụ ụzọ doro anya nke nkwonkwo tile tile.
Elu ala osisi
E nwekwara ike itinye ala PVC ozugbo. N'ihi nkwụsi ike na-adịghị mma nke ala osisi ahụ, a na-atụ aro ka ị jiri gluu ọcha na ntụ ntụ iji rụkwaa nkwonkwo ala na ala ala. Mgbe etinyere ala PVC, ọ bụrụ na ala plastik ahụ dị oke mkpa, elu ga-adị oke. Enwere akara akara. Elu nke ala osisi enweghị ike ịbụ nhazi nke onwe-ya.
Anabataghị iwu ụlọ nke onwe-ya n'elu igwe nke ígwè. O kwere omume dina n’elu ala PVC. Rịba ama na a ga-edozi welds na nkwonkwo nke efere ígwè na putty ma mee ka ọ dị nro tupu ịtọba ala PVC. Otú ọ dị, elu nke ala a rụrụ arụ adịghị arụ ọrụ. Maka ndị nwere ụkpụrụ embossed n’elu igwe nchara, elu nke
Epoxy onwe-leveling n'ala.
Epoxy ala enweghị ike ịbụ nhazi ụlọ nke onwe. Ọ bụrụ na achọrọ iwu nhazi onwe gị, nsogbu delamination ga-eme. Enwere ike ịrụ ụlọ PVC ugbu a. A ghaghị ịmịcha elu nke ala ahụ tupu a rụọ ya, ala a na-ete mmanụ ga-ebelata ọgwụgwọ tupu ịtọba ala PVC.
Kọwaa nkenke n'etiti ala PVC na ala roba dị nkenke?
Esi dinara keakamere turf maka odida obodo ntụrụndụ greening